Asomafo Nnwuma 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Cubeo Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guahibo Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Inga Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Macushi Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Rapa Nui Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Asomafo Nnwuma 18:1-28
Paul kaa asɛm no wɔ Korinto (1-17)
Ɔsan kɔɔ Antiokia a ɛwɔ Siria (18-22)
Paul fii hɔ kɔɔ Galatia ne Frigia (23)
Wɔboaa Apolo, ɔbarima a n’ano atew no (24-28)
18 Eyi akyi no, Paul fii Atene kɔɔ Korinto. 2 Na ohuu Yudani bi a wɔfrɛ no Akwila+ a ɔyɛ Pontoni. Ná ɔne ne yere Priskila fi Italy baa hɔ nkyɛe, efisɛ na Klaudio ahyɛ sɛ Yudafo nyinaa mfi Roma. Na Paul kɔɔ wɔn nkyɛn, 3 na esiane sɛ na ɔne wɔn yɛ adwuma koro nti, ɔtenaa wɔn fi ne wɔn yɛɛ adwuma,+ efisɛ na ntamadan adwuma na wɔyɛ. 4 Homeda+ biara, na ɔka asɛm* wɔ hyiadan mu,+ na na ɔkasa ma ɛtɔ Yudafo ne Greecefo no koma so ma wogye di. 5 Na bere a Silas+ ne Timoteo+ nyinaa fii Makedonia bedui no, Paul fii ase de ne bere nyinaa kaa asɛm no, na odii adanse kyerɛɛ Yudafo no sɛ, Yesu ne Kristo no.+ 6 Nanso wɔsɔre tiaa Paul mpɛn pii, na wɔyeyaw no. Enti ɔporoporow n’ataade mu,+ na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo mogya ngu mo ara mo ti so.+ Me de, minni fɔ.*+ Efi nnɛ rekɔ, amanaman mufo nkyɛn na mɛkɔ.”+ 7 Enti ofii hɔ,* na ɔkɔɔ ɔbarima bi a ɔsom Onyankopɔn a wɔfrɛ no Titio Yusto fi. Ná ne fi no ne hyiadan no bɔ ho. 8 Na Krispo+ a ɔyɛ hyiadan mu panyin no gyee Awurade dii, ɔne ne fifo nyinaa. Na Korintofo a wɔtee no mu pii fii ase gye dii ma wɔbɔɔ wɔn asu. 9 Afei Awurade ka kyerɛɛ Paul wɔ anisoadehu mu anadwo sɛ: “Nsuro, kɔ so kasa, na nka w’ano ntom, 10 efisɛ meka wo ho,+ na obiara ntumi mfa ne nsa nka wo nyɛ wo bɔne biara; na mewɔ nnipa pii wɔ kurow yi mu.” 11 Enti ɔtenaa hɔ afe ne abosome asia, na ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn Onyankopɔn asɛm. 12 Bere a Galio yɛ Akaia mantam soafo* no, Yudafo no yɛɛ baako sɔre tiaa Paul, na wɔde no kɔɔ atemmu agua no anim. 13 Na wɔkae sɛ: “Saa ɔbarima yi redan nkurɔfo adwene. Ɔka sɛ wɔmfa ɔkwan foforo a ɛne mmara no nhyia so nsom Onyankopɔn.” 14 Bere a Paul yɛe sɛ ɔrebue n’ano akasa no, Galio ka kyerɛɛ Yudafo no sɛ: “Yudafo, sɛ ɛyɛ mfomso anaa bɔne kɛse bi a, anka mɛtɔ me bo ase atie mo. 15 Na mmom sɛ ɛyɛ nsɛm, ne edin, ne mo ara mo mmara ho akyinnyegye+ de a, ɛnde mo ara monhwɛ nka. Mempɛ sɛ meyɛ saa nsɛm yi ho temmufo.” 16 Bere a ɔkaa saa no, ɔpam wɔn fii atemmu agua no anim. 17 Enti wɔn nyinaa tu guu Sostene+ a ɔyɛ hyiadan mu panyin no so, na wofii ase hwee no wɔ atemmu agua no anim. Nanso Galio anyɛ eyinom ho hwee. 18 Na bere a Paul dii nna kakra kaa ho wɔ hɔ no, ɔne anuanom no dii nkra, na ɔde po so hyɛn fii hɔ kɔɔ Siria, na na Priskila ne Akwila ka ne ho. Na oyii ne ti ma ɛkɔɔ fam wɔ Kenkrea,+ efisɛ na wahyɛ bɔ. 19 Bere a woduu Efeso no, ogyaw wɔn wɔ hɔ. Na ɔno de, ɔkɔɔ hyiadan mu ne Yudafo no kosusuw nsɛm ho.+ 20 Wɔsrɛɛ no sɛ ɔntena wɔn nkyɛn nkyɛ kakra, nanso wampene. 21 Mmom ɔne wɔn dii nkra, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ Yehowa* pɛ a, mɛba mo nkyɛn bio.” Na ofi Efeso faa po so, 22 na ɔkɔɔ* Kaesarea. Afei ɔkɔe* kokyiaa asafo no. Ɛno akyi no, ɔkɔɔ* Antiokia.+ 23 Bere a ɔtenaa hɔ kakra no, ofii hɔ, na otutuu akwan faa Galatia ne Frigia+ nsaase so, na ɔhyɛɛ asuafo no nyinaa den.+ 24 Na Yudani bi a wɔfrɛ no Apolo+ a ofi Aleksandria baa Efeso. Ná ɔyɛ ɔbarima a n’ano atew, na na onim Kyerɛwnsɛm no mu yiye. 25 Ná wɔakyerɛkyerɛ saa ɔbarima yi wɔ Yehowa* kwan so, na esiane sɛ na honhom no ahyɛ no ma nti, ɔkaa Yesu ho asɛm kyerɛkyerɛɛ mu pɛpɛɛpɛ. Nanso na Yohane asubɔ no nko ara na onim. 26 Apolo fii ase de akokoduru kasae wɔ hyiadan no mu. Bere a Priskila ne Akwila+ tee nea ɔreka no, wɔfaa no kaa wɔn ho, na wɔkyerɛkyerɛɛ Onyankopɔn akwan no mu pɛpɛɛpɛ kyerɛɛ no. 27 Ná Apolo pɛ sɛ ɔkɔ Akaia, enti anuanom no kyerɛw asuafo a ɛwɔ hɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ wonnye no kama. Na bere a oduu hɔ no, ɔboaa wɔn a wɔnam Onyankopɔn adom so abɛyɛ gyidifo no paa; 28 efisɛ ɔyeree ne ho denneennen daa no adi pefee wɔ baguam sɛ Yudafo no afom kwan, na ɔde Kyerɛwnsɛm no kyerɛkyerɛɛ wɔn ma wohui sɛ Yesu ne Kristo no.+
^ Anaa “ɔne wɔn susuw nsɛm ho.”
^ Nt., “me ho afi.”
^ Kyerɛ sɛ, hyiadan no mu.
^ Ɔpanyin a ɔhwɛ Roma mantam bi so. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “osian kɔɔ.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɔforo kɔɔ Yerusalem.
Asomafo Nnwuma 18